मृत व्यक्तिसँग बसेर डिनर खान पाइने रेष्टुरेन्ट | Rajmarga
यदि तपाई मुर्दाका साथ बसेर लञ्च या डिनर गर्नु परे के गर्नु हुन्छ होला ? तपाई मुर्दाको नाम सुन्ने बित्तिकै भाग्नु होला । त्यहाँ जाने र खाने त टाढाको कुरा ।
तर, धेरै परिकार पारखीहरु यस्ता पनि छन् जो मुर्दासँगै बसेर बिना हिच्किचाहट खानाको आनन्द लिन्छन् ।
यो रेष्टुरेन्ट कब्रिस्तानमा बनेको छ। यहाँ एक दर्जनभन्दा पनि बढी कब्र अर्थात चिहान छ । मानिसहरु यही आएर खाना खान्छन् ।
साथीहरुसँग गफिँदै चिया पिउँछन् । यो रेष्टुरेन्ट टाढा होइन, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको अहमदावाद सहरमा छ । आजकल मानिसहरु ठुलो संख्यामा यो रेष्टुरेन्ट जाने गरेका छन् । यसले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ।
रेष्टुरेन्टको नाम हो न्यु लकी रेष्टुरेन्ट । यो रेष्टुरेन्टका मालिक कृष्णन कुट्टी हुन् । कुट्टी भन्छन्–मृत व्यक्तिहरु भाग्यमानी हुन्छन् । यो रेष्टुरेन्टभित्र कम्तीमा पनि एक दर्जन चिहान छन् । यहाँ आउने ग्राहक खाना अर्डर गर्नुअघि चिहानमा शिर निहुराउछन् । र, मृतक व्यक्तिप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् । त्यसपछि मात्र खाना खाने गर्दछन् । यो रेष्टुरेन्टमा दिनहुँ खान आउनेहरु यहाँ आएर शान्ति मिलेको बताउछन् ।
यो न्यु लकी रेष्टुरेन्ट अहमदावादको लाल दरबार क्षेत्रमा छ । यहाँ सबैभन्दा पहिला सन् १९५० मा के एच मोहम्मद नामका एक व्यक्तिले कब्रस्तानबाहिर चिया पसल खोलेका थिए । कृष्णन नायरलाई पसल चलाउन उनैले सहयोग गरेका हुन् । व्यापार राम्रो भएपछि उनीहरु साझेदार बनेका थिए ।
विस्तारै दुवैले आफ्नो पसल विस्तार सुरु गरे । र, कब्रस्तान भएको स्थान घेरा हाले । यसपछि चियाका साथै खाना खुवाउन पनि सुरु गरियो । सुरुवातमा तिनै व्यक्ति मात्र चिया पिउँथे जो नातेदारलाई गाड्न आउँथे । तर, विस्तारै आसपासका मानिसहरु पनि यहाँ चिया पिउन आउन थाले । अहिले त चिया मात्र होइन, यहाँको खाना निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ। एजेन्सी
Previous post: यो उमेरमा महिलाहरुले दिन्छन् यौन सन्तुष्टि !
Next post: सेक्स इन्कार गरे महिलालाई पुरुषको मुखमा पिसाव गर्ने अधिकार